कोभिड-१९का कारण एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने – News Dainik
कोभिड-१९का कारण एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने
रश्मी २४ भाद्र २०७७, बुधबार ०८:१९ विविध प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । कोभिड- १९का कारण एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी फर्कनेमा विभिन्न देशबाट रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय गुमाउने रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको हो ।
कोभिड–१९ ले श्रम बजार (स्वदेश वा विदेश)मा पार्ने असर विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनमा पाइएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा समेटिएको त्यो सङ्ख्या कोभिड–१९ का कारण छ महिनादेखि रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय बन्द भएर समस्यामा परेकाको रहेको उल्लेख छ । भारतबाहेक विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा ३२ लाख आठ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको पनि अध्ययन
अघिल्लॊ गण्डकी प्रदेशमा ११ संक्रमित थपिए
पछिल्लॊ कुुन प्रदेशको मौसम कस्तो रहला ? यस्तो छ तीन दिनको पूर्वानुमान